बलात्कारीलार्इ खसी बनाउनु पर्दछ अनि………. – Pokhara Hotline News
बलात्कारीलार्इ खसी बनाउनु पर्दछ अनि……….
By Pokhara Hotline	 On २०७१ चैत्र ६ गते शुक्रबार ०८:५७
देशमा दुईथरीको अहिले बिगबिगी छ । एउटा भ्रष्टाचारीको र अनि अर्को बलात्कारीको । भ्रष्टाचारी पनि कस्ता भन्दा कात्रो किन्दा पनि बिल भर्पाइ बढाउनेहरु छन् । त्यस्तै बलात्कारी त झन सम्झदा पनि आ· नै सिरि· हुने नाबालिकाहरु प्रति अमानवीय र क्रुरतामा ओर्लिनेहरु धेरै पाइन्छन् ।
अहिले बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनु पर्ने माग नागरिक समाज, महिला संघ संस्था कानुनविद र आम जनसमुदायबाट चर्को रुपमा आएको छ । यो अत्यन्त जायज छ । सजाय माग गर्नेमा आजीवन कारावास जन्म कारावास र मृत्युदण्ड सम्मको माग आएका छन् ।
तर रमितेको विचारमा बलात्कारीलाई पहिले “खसी” बनाउनु सबैभन्दा पहिलो काम हो । “खसी” बनाएपछि उसलाई आजीवन कारावास, जन्म कारावास वा श्रम आजीवन कारावासको कडा सजाय उपयुक्त हुन्छ । मृत्युदण्ड नै दिए पनि ८÷१० वर्ष “खसी” बनाएर राखेपछि मात्र त्यो कार्यान्वयन गर्नु कडा सजाय हुनेछ भन्ने रमिते सल्लाह छ । कसो ?
सरोज केसी कास्की क्षेत्र नं. १ बाट सचिवका उम्मेदवार
स्याङ्जाको ‘सिरुबारी होमस्टे’ पुनः सञ्चालनमा
दीप यूनाइटेड क्लबको देउसी भैलोबाट ९ लाख २५ हजार संकलन
लाइफकेयर डायग्नोष्टिक प्रा.लि. (लाइफ केयर) ल्याबद्धारा कोभिड-१९ एन्टिबडी परीक्षण सेवा सुरु
पोखरामा भ्यानले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु,एक गम्भीर घाइते
घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना: ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
१८ दिन देखी न्यायको लागी पैदल हिडेका १५ जनालाई गल्छी गाउँपालिकाद्धारा खाना र बस्ने व्यबस्था
“६६ औं प्रहरी दविस”प्रहरी दविसको अवसरमा रक्तदान, माक्स वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौंबाट पोखरा आउँदै गरेको कार त्रिशुली नदीमा खस्यो,तीन जना बेपत्ता
व्यास नगर सचिवमा लड्ने नगेन्द्र पौडेलको घोषणा